Mai Chibwe VekwaZimuto: Kubikirana mumba.
Posted by Mai E Chibwe at 14:44
ini murume wangu anoti anoda muriwo une muto (soup) yakawandisa , kutoita zvekunwa chaiko, zvino ini ndinoona sekuti muriwo ukawanda soup effort dzangu dzekukanga ndinenge ndashandira zvisipo, zve haafariri ma packed soup aya ana royco nezvimwewo , zvino kungoita soup yemvura zvingabudewo here
18 February 2013 at 02:51
Umwe noumwe munhu ane zvokudya zvaanoda. Kana une murume/mukadzi mumba, chikuru kuhwisisa kuti zvaanfarira zvii? Ini ndikangoona mmbambaira ndotodzitenga chete. murume wangu akaonawo mbambaira anohwisisa kuti ndodzida saka anodzitenga. Chikuru kukurrudzira munhu kudya zvine BALANCE asi achigarodya zvaanoda.
Uyu wekungoda muto anenge asingadhuuri saka zvakatonaka uye hazvinetsi kugadzira.